लगानी | गृहपृष्ठ | Page 5
कृषि विकास बैंकको सञ्चाकलमा रघुराम विष्ट आए
वैशाख १२, काठमाडौं (अस) । कृषि विकास बैंकले रघुराम विष्टलाई सञ्चाकलको रुपमा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएको...
१ खर्ब १ अर्ब कर्जा प्रवाह गर्दा सिद्धार्थ बैंकको नाफा कति ?
वैशाख १२, काठमाडौं (अस) । चैत मसान्तसम्ममा सिद्धार्थ बैंकले रू. १ अर्ब ५९ करोड नाफा कमाएको छ । यो नाफा गत आवको...
वैशाख १२, काठमाडौं (अस) । साताको अन्तिम दिन रू. १ अर्ब ३५ करोडको शेयर कारोबार भएको छ । १७६ कम्पनीको ४५ कित्ता...
लक्ष्मी बैंकको बोनस नेप्सेमा सूचिकृत
वैशाख १२, काठमाडौं (अस) । लक्ष्मी विकास बैंक लिमिटडेको बोनस शेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको छ । कम्पनीको ६९ लाख ८८...
मेरो माइक्रोफाइनान्सको नाफामा ८६ प्रतिशत वृद्धि
वैशाख १२, काठमाडौं (अस) । मेरो माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाले चालू आवको तेस्रो त्रैमासमा गत आवको सोही अवधिको...
वैशाख १२, काठमाडौं (अस) । साताको अन्तिम दिन नेप्से परिसूचक कारोबारको तेस्रो घण्टाको अवधिमा भने १ हजार २९० दशमल...
९ महीनामा सानिमा बकैंको खुद नाफा ३० प्रतिशत वृद्धि
वैशाख १२, काठमाडौं (अस) । चालू आवको ९ महीनामा सानिमा बैंकको खुद नाफा ३० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । बैंकले रू. १...
on: ११ बैशाख २०७६, बुधबार ०७:४१ कम्पनी विश्लेषण, लगानी
कम्पनीले चैत मसान्तसम्ममा रू. २ अर्ब २१ करोड खुद नाफा कमाएको छ । गत आवको सोही अवधिमा कम्पनीले रू. १ अर्ब ८७ करोड कमाएको थियो । कम्पनीको खुद ब्याज आम्दानी १६ प्रतिशत र सञ्चालन नाफा १८ प्रतिशत...	बिस्तृतमा
on: ११ बैशाख २०७६, बुधबार ०७:३९ कम्पनी विश्लेषण, लगानी
कम्पनीले शत प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न सेबोनमा २०७५ जेठ २२ गते निवेदन दिएको थियो । कम्पनीले २५ लाख ५१ हजार ५ सय कित्ता हकप्रद शेयर जारी गर्न निवेदन दिएको हो । विक्रीप्रबन्धकमा एनआईबीए...	बिस्तृतमा
वैशाख १०, काठमाडौं । बुधवारदेखि विक्री बन्द गर्ने भनिएको रसुवागढी र साञ्जेन जलविद्युत् कम्पनीको आईपीओ बिहीवारसम्म विक्रीका लागि खुला रहने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डको निर्देशनमा दुवै कम्...	बिस्तृतमा
वैशाख १०, काठमाडौं (अस) । वैशाख ८ गतेदेखि सर्वसाधारणलाई खुला भएको नेपाल एग्रो लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको आईपीओ भर्ने बुधवार अन्तिम दिन रहेको छ । विक्री खुला भएको तेस्रो दिनमै ३१ गुणा...	बिस्तृतमा
वैशाख १०, काठमाडौं (अस) । हालसम्म नेपालमा बन्दमुखी सामूहिक लगानीकोष (म्युचुअल फण्ड) योजनाहरु मात्र सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा खुलामुखी म्युचुअल फण्ड योजना सञ्चालनको लागि बाटो खुलेको छ । नेपाल...	बिस्तृतमा
on: १० बैशाख २०७६, मंगलवार १७:४७ लगानी
वैशाख १०, काठमाडौं (अस) । नागवेली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडमा ६ जना सञ्चालकहरु निर्वाचित भएका छन् । कम्पनीको चैत १५ गते सम्पन्न भएको सभाले संस्थापक तर्फबाट चार जना र सर्वसाधारण तर्फबाट...	बिस्तृतमा
वैशाख १०, काठमाडौं (अस) । बरूण हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले घाटा कम गर्दै लगेको छ । गत वर्ष रू. ५५ लाख ४५ लाख घाटामा रहेको कम्पनीले यस वर्ष ६१ प्रतिशत घाटा कम गरेको हो । यस आर्थिक वर्षको ते...	बिस्तृतमा
on: १० बैशाख २०७६, मंगलवार १६:४६ नेप्से विश्लेषण, मुख्य खबर, लगानी
वैशाख १०, काठमाडौं (अस) । मंगलवार नेप्से ३ दशमलव ७४ अंकले बढेर १ हजार २६० दशमलव ६८ विन्दुमा बन्द भएको छ । कारोबार भएका ११ समूहको परिसूचकमा पाँच समूहको परिसूचक बढेपछि सम्रग नेप्से परिसूचक शून...	बिस्तृतमा
वर्ल्ड मर्चेण्ट बैंकिङले उठायो ४ करोड खराब कर्जा
on: १० बैशाख २०७६, मंगलवार १६:१४ लगानी
वैशाख १०, काठमाडौं (अस) । वर्ल्ड मर्चेण्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स लिमिटेडले चालू आवको तेस्रो त्रैमासमा रू. ४ करोड १४ लाख खराब कर्जा उठाउन सफल भएको छ । कम्पनीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्या ग्रस...	बिस्तृतमा
on: १० बैशाख २०७६, मंगलवार १४:१५ नेप्से विश्लेषण, लगानी
वैशाख १०, काठमाडौं (अस) । मंगलवार नेप्से परिसूचक ३ घण्टामा १ हजार २५१ दशमलव ६० विन्दुमा पुगेको छ । कारोबारमा आएका ११ समूहमध्ये ७ समूहको परिसूचक घटेपछि समग्र परिसूचक ५ दशमलव ३४ अंकले घटेको हो...	बिस्तृतमा